TRF အရင်းအမြစ်များကိုဖွံ့ဖြိုး | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း TRF အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှသင့်အားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများမှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းပြရန်နောက်ဆုံးပေါ်အရင်းအမြစ်များကိုပေးသည်။ ဤအပိုင်း၌သင်စိတ်ဝင်စားစရာပစ္စည်းများများစွာတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများစတင်ထုတ်လုပ်ပြီးပါပြီ။ စာအုပ်များ၊ ညစ်ညမ်းသောသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောဗွီဒီယိုများ၊ သတိရဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအသံသွင်းခြင်းနှင့်သုတေသနအသစ်အသစ်များကိုပြန်လည်ဝေငှနိုင်သည့်အတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလသိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများကိုမည်သို့ရယူနိုင်ကြောင်းအကြံဥာဏ်များလည်းပေးသည်။
လူသားတွေအဓိကအားစိတ်လှုပ်ရှားမှုခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေစဉ်, နည်းပညာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းပြီးကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်း algorithms နှင့်အတူဆောက်လုပ်ထားစင်ကြယ်သောယုတ္တိဗေဒအပေါ်အခြေခံသည်။ အင်တာနက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်သောမိသားစုတစ်စု၏ထက်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများကိုပုံဖော်အပေါ်တစ်ဦးအလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ယင်း၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်းအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်သားစဉ်မြေးဆက်, ငါတို့သာယာဝပြောရေးဖို့အရေးကြီးသည်။ ဒီစိတ်ကူးကိုတုံ့ပြန်ရန်, ငါတို့ကလူမေတ္တာ, လိင်ဆက်ဆံရေးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုသိရန်လိုချင်တာတွေကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်။ Mid-2014 ကတည်းကလိင်ပညာရေးလယ်ပြင်၌ရှိသောလူငယ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုလက်ရှိသင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်များ၏အရည်အသွေး, ဆီလျော်မှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မကျေနပ်မှုများမြင့်မားကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ TRF ဒီအချိုးမညီမျှမှုအမှားကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကူညီရန်အရင်းမြစ်များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
The Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှမှကိုယ်စားလှယ်များသည်ယခုအခါဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိလူထုပွဲများပေါင်းနှစ်ဒါဇင်ကျော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်အေ၊ ဂျာမနီ၊ တူရကီနှင့်ခရိုအေးရှားရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိသတ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာ, ကျောင်းများမှာယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏တစ်ခုလုံးကို Form များနှင့်အတူပြောပြီအဖြစ်အသေးစားအုပ်စုများနှင့်တဦးတည်းအနေနဲ့တစ်ဦးချင်းအခြေခံအတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကလက်ရှိပစ္စည်းများများ၏အားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်မယ်ရသောအရင်းအမြစ်များကိုပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူ့ဗဟိုဒီဇိုင်း၏ technique ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
နောက်နှစ်ကျော်အကျိုးကို Foundation မှမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုရန်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။